8 ka mid ah ciidammada Kenya Oo miino lagu qarxiyay, Wajeer | Afrikada
8 ka mid ah ciidammada Kenya Oo miino lagu qarxiyay, Wajeer
Afrikada, Wajeer: Wararka ka imaanaya wadanka Kenya waxa ay sheegayaan in qarax lala beegsaday ciidammo ka tirsan milleteriga Kenya ee degaanka Bojigaras ee gobolka Wajeer.
Dadka dhibanayaasha ah waxaa ka mid ah saraakiisha maamulka gobolka iyo 3 kale oo ka tirsan bileyska.
Dad goob joog ahaa ayaa ku soo waramaya in dadkii saarnaa baabuurka ay dhammaantood halkaasi ku geeriyoodeen.
Xiriiriyaha dhanka nabadgelyada ee Waqooyi Bari Kenya Maxamd Saalax ayaa sheegay in dadkii ka dambeeyay weerarka ay goobta ka baxsadeen markii ay qaraxa geysteen. Waxaa uu Saalax farta ku fiiqay in qaraxa ay geeysteenkooxda mintidiinta Al-Shabaab.
Arrintan ayaa imaaneysa kadib markii ay booliska Kenya ay maalmihii la soo dhaafay hadalhayeen in weeraro ay dhici karaan gudaha dalkaasi.
Waxa sidoo kale la sheegayaa in goobta weerarku ka dhacay ay tahay agagaarka Xar-Xar taasi oo dhowr kiiloomitir u jirta xaduudka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Goojogeyaal ayaa ku waramay in qaraxu dilay 5 ka mid ah ciidanka Kenya isla markaasina uu burbur u geystay gaarigii ay wateen.
READ MORE: DAAWO Naxdinta: Ciidammada AMISOM oo mar kale Rasaas Hoos Ugu dhigay Dad rayid ah (DHAGEYSO GUNUUNUCA DADKA Soomaalidu Raalli kama ahan Dowladda hadda jirta iyo Sida wax u Socdaan Oo dhan!!)
Askarta kale ee 3-da ah ee badbaaday ayaa si xun qaraxu u dhaawacay. Dhammaantood waxa ay ciidammada ka tirsanaayeen guutooyinka GSU-da ee fadhiya kaamka Harhar. Warar kale waxa ay sheegayaan in ay ku daba jireen sonkor la sheegay in laga soo gooshiyo xaduudka ka hor inta aan askarta la qarxin.